बिहान उठ्नेबित्तिकै आफनै हातको दर्शन गर्नुहोस्, हरेक काम बन्नेछ छिनभरमै सफल ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/बिहान उठ्नेबित्तिकै आफनै हातको दर्शन गर्नुहोस्, हरेक काम बन्नेछ छिनभरमै सफल !
काठमाडौँ ।जब कुनै व्यक्ति कुनै समस्या वा कुनै दुविधामा पर्दछ, उसले सँधै परमेश्वरलाई सम्झन्छ र भगवानलाई प्रार्थना गर्दछ, हे परमेश्वर, कि तपाईंले उसलाई यस समस्याबाट बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ वा हाम्रो समस्या कम गर्न कुनै तरिका देखाउन सक्नुहुन्छ। मानिसहरूलाई पूर्ण विश्वास छ कि प्रार्थनाले उनीहरूको समस्या समाधान गर्दछ।
विहान उठेर हत्केलाको दर्शन गर्नाले हुन्छ दिन नै शुभ । हाम्रा दैनिक जीवनका पनि संस्कार छन् । दैनिक संस्कार पालना गर्न सक्यो भने जीवन सुखमय हुनसक्छ । दिनचर्याको शुरुवात जहिले पनि विहान उठेपछि हुन्छ । विहान उठ्ने वित्तिकै हामीले जे गर्छौ त्यसको प्रभाव दिनभरी रहन्छ । यहाँ विहान उठ्ने वित्तिकै गर्नु पर्ने दैनिक संस्कारको चर्चा गरिएको छ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
विहान उठ्ने वित्तिकै हत्केलाको दर्शन गर्नु उत्तम मानिन्छ । हरेक मानिस दिनभरी शान्त र प्रसन्न रहन चाहन्छ । यसका लागि हामीले उठ्ने वित्तिकै हत्केलाको दर्शन गर्ने गर्‍यो भने दिन शुभ हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
विहान उठ्ने वित्तिकै पुस्तक हेरे जस्तै गरी हत्केलाको गर्दा दिनभर मन शान्त र प्रसन्न रहने उल्लेख छ ।
कराग्रे वसते लक्ष्मीस् करमध्ये सरस्वती।
अर्थात- मेरो हातको अग्र भागगमा लक्ष्मी, मध्य भागमा सरस्वती र मूल भागमा ब्रह्माको निवास छ ।हातको दर्शन गर्दा आफ्नो भाग्यमा नभएर कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ । यसरी हातको दर्शन गर्दा जीवनमा धन, सुख र ज्ञान प्राप्त हुने शास्त्रको भनाइ छ । हातको दर्शन गर्नुको अर्थ हो मेरा हातबाट कुनै पनि खराव काम नहुन् । सबै कल्याणको काम मात्र होस् ।
हातको दर्शन नै किन
हाम्रो संस्कारले सदैव सत्कर्मको सन्देश दिन्छ । र अधिकाँश कर्म हातबाटै गरिन्छ । धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष पाउनु पुरुषार्थ मनिन्छ । यी सबैमा हातको भूमिका प्रधान हुने भएका कारण पनि हातको दर्शन गर्न भनिएको हो ।यो केवल कर्मको माध्यमबाट मात्रै एक व्यक्ति ठूलो वा न्यून हुन्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसैले भगवानलाई आफ्नो कर्म लाइनहरू बलियो बनाउनको लागि भगवानको पर्थना गर्नु आवश्यक हुन्छ। दैनिक बिहान उठेर आफ्नो हातको दर्शन गर्नाले तपाईले गर्नुभएका गल्ती सहि कुरालाई सम्झना गर्नुहुनेछ जसले तपाईको जिन्दगीलाई नै बदलदिन्छ ।